Ikike Ọrụ - Ndị na-eme nde
Akwụkwọ ikike na
Anyị na-akwado ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ maka ịchọta ohere na ndị chọrọ, n'otu n'otu yana itinye n'ọrụ na imecha usoro ahụ.
Anyị na-eji ntachi obi na ọmịiko azụlite ndị ahịa anyị.
Anyị na-ewetara ndị mmadụ n'otu n'otu / ezinụlọ / obere azụmahịa / nnukwu ụlọ ọrụ ụwa nke na-arụ ọrụ kachasị gị mma na nkwado maka mkpa mbata ọpụpụ ọpụpụ gị niile
Soro anyị kerịta ihe ị chọrọ, anyị ga-eduzi gị otu esi,, n'ụwa niile.
Chọgharịa site Mpaghara
Site na nkwado anyị doro anya, nke dị mkpirikpi na nke ahaziri iche, ị ga-aghọta ọrụ gị na usoro mbata na ọpụpụ ma mara nke ọma ihe ị kwesịrị ime iji mee ka gị na ezinụlọ gị banye n'ụlọ ọhụrụ gị ọsọ ọsọ. Ọbụna nanị ihe ndị dị mkpa maka mbata na ọ na-esikarị ike nghọta — ya adịla mgbe ị ga-etinye aka n’ụkpụrụ ọtụtụ atụmatụ mbata na ọpụpụ. Y’oburu n’ichoo onwe gi ifu n’oké osimiri nke iwu na ụkpụrụ mbata na ọpụpụ, Nde nde ndị na-eme ihe ga-akwado. anyị ga-eme mgbagwoju anya, dị mfe ma dịkwa mfe, dịka anyị ga-anwa iduzi gị na ezinụlọ gị site na mbata na ọpụpụ chọrọ nke mba ọhụrụ gị. Na anyị nkenke, doro anya na ahaziri nkwado, ị ga-aghọta ọrụ gị n'ime mbata na ọpụpụ Filiks na-aghọta kpomkwem ihe ị ga-eme iji mee ka gị na ezinụlọ gị gaa n'ụlọ ọhụrụ gị dị ka ngwa ngwa o kwere mee n'ụzọ kasị dị irè.
N'oge ụfọdụ ihe chọrọ mbata na ọpụpụ maka nnabata ọ bụla nwere ike isi ike nghọta, mana echefula na usoro atụmatụ mbata na ọpụpụ nke nwere ọtụtụ ụzọ mbata na ọpụpụ. Ọ bụrụ n’ịchọọ na onwe gị funahụrụ n’iwu nke iwu mbata na ọpụpụ nke mbata na ọpụpụ, nde ndị ọrụ ga-eme ka ọ dị mfe. Anyị ga-eme ka ihe kachasị dị mfe dịka anyị nwere ọchịchọ iduzi gị na ezinụlọ gị site na mbata na ọpụpụ nke mba ọhụrụ gị.
Site na nkwado anyị doro anya, dị mfe, na mkpesa, ịhazi ọfụma, ị ga-aghọta ọrụ gị n'ime mbata na ọpụpụ mbata, ọ ga-amata nke ọma ihe ị ga - eme iji mee ka gị na ezinụlọ gị bata n'ụlọ ọhụrụ gị ngwa ngwa.
Nhọrọ nke ohere kacha mma / Nhọrọ maka mmezu nke mmezu na ebumnuche.
24/7/365 gaa na ọnọdụ gị n ’ebe ọ bụla n’ime ụwa.
Nweta iwu ọpụpụ ọhụụ, ụkpụrụ na ozi ọma.
Ma ị na-enwe nnukwu ikike ikike ikike ka ọ bụrụ na ị na-achọ enyemaka maka mbata na ọpụpụ na mba ma ọ bụ mpaghara doro anya, ndị ọrụ nde ga-enyere gị aka n'enweghị nsogbu iji jikwaa mmegharị nke ndị ọrụ gị / ndị ọrụ. Ezubere iji mejuo ihe ị chọrọ maka nkwado zuru oke, ọrụ anyị zuru oke maka ọrụ ikike na ọrụ ikike ịkwado iji hụ na usoro a na-agbaso iwu na ụkpụrụ mbata na ọpụpụ mbata na ọpụpụ.
Ọrụ ndị a gụnyere:
Nkwadebe ntinye na ịgba akwụkwọ maka ọrụ nwa oge na ikike obibi, visa ịbanye, mwepu ya na ihe ndị si mba ọzọ.
Nkwado nke Visa.
Ndụmọdụ banyere ịbanye na ụzọ ọpụpụ.
Ndụmọdụ gbasara usoro nchekwa na ịhapụ ịgwọ ọrịa.
Ndụmọdụ maka ikpe gbagwojuru anya, gụnyere nkwado na ịgba akwụkwọ n'ihu ụlọ ọrụ gọọmentị.
Nkwanye nkwado na ndị ezumike n’ụlọ ọrụ nhazi visa, ike ichepụta ihe, ihe metụtara ụmụ akwụkwọ na ndozi nguzo na ọnọdụ.
Ndị otu anyị amụrụla ma nweekwa ọfụma na-ewepụta oge ịghọta ebumnuche azụmahịa nke ụlọ ọrụ gị, ebumnuche mbata na ọpụpụ na ndị ọka iwu. Ha na-agwa gị na gị na ndị nnọchi anya gị niile n'oge usoro mbata na ọpụpụ, na-ewulite mmekọrịta ndị a tụkwasịrị obi ma na-enye nkwado zuru oke, ahaziri iche.
Họrọ obodo maka ikike inye oru
Họrọ mpaghara EuropeEuropean UnionAfricaAsiaAustralia na OceanicCaribbeanMiddle EastNorth AmericaSouth America Họrọ Country
Mba choro nke ndi choro igha
Ọrụ Ndị Gụnyere
Nzọụkwụ site na Nzọụkwụ - Site na mbido gaa nke ọma
Nzọụkwụ 1: Choputa mkpa ndi Onwe / Ezin’ulo / Azụmaahịa
Nzọụkwụ 2: Nhọrọ nke ohere kachasị mma / Nhọrọ maka mmezu nke mmezu na ebumnuche.
Nzọụkwụ 3: Na-ezipụ nhọrọ kachasị mma maka nnabata.
Nzọụkwụ 4: Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ileba anya na nleta na mba ahụ, ọ bụrụ na ịnọghị ebe ahụ.
Nzọụkwụ 5: Mụta ohere ahụ.
Nzọụkwụ 6: Akaụntụ na ndụmọdụ gbasara ụtụ, ọ bụrụ na ọdabara.
Nzọụkwụ 7: Nchịkọta na nkọwa zuru ezu banyere ohere ọ bụla.
Nzọụkwụ 8: Nlekọta na usoro.
Nzọụkwụ 9: Nkwadebe na ido onwe onye n'okpuru ndị isi dị mkpa.
Nzọụkwụ 10: NSỌ!
Anyị na-enye ọtụtụ nhọrọ n'okpuru otu ụlọ, 1 mmekọrịta maka mkpa mpaghara gị niile ma ọ bụ nke ụwa niile.
Mgbe niile ịza ajụjụ gị, kwado gị na ebumnuche gị na ebumnuche gị, na-enyere gị aka ịchekwa oge na ego.
Ihe onye ọ bụla chọrọ bụ ihe dị iche iche, yabụ, anyị na-ekepụta ụzọ ịchọrọ maka azịza maka gị, maka mmepe mba gị niile.
Forgwọ maka ọrụ anyị dị asọmpi na-enweghị akwụ ụgwọ zoro ezo, nke na-arụ ọrụ maka mmadụ niile, ma ị bụ Onye ọ bụla ma ọ bụ obere, ọkara ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ.
N'ime ọtụtụ afọ ka anyị na ndị ọrụ, ezinụlọ, na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, anyị azụlitewo ihe ọmụma bụ isi gafere ọtụtụ ọrụ dị iche iche, zuru ụwa ọnụ.
Anyi nwere otu ndi okacha mara nke aka, ndi otu na ndi anyi na ha ga enye ndi ahia anyi otutu ihe aka.
Anyị bụ ndị mmekọ, ndị na - enye ọrụ, ndị ọka iwu, CFPs, Ndị na - aza ajụjụ, ndị na - ahụ maka ego, ndị ọkachamara na - ahụ maka ego, ndị ọkachamara ọpụpụ na ndị nwere ikike nke ukwuu, ndị na-ebute nsonaazụ.
Mgbe anyị nwere mkpebi siri ike, anyị agaghị emebi ụkpụrụ na ụkpụrụ anyị. Anyị na-eme ihe ziri ezi, ọ bụghị nke kachasị mfe.
Anyị na-efe ndị mmadụ n'otu n'otu, ezinụlọ na ụlọ ọrụ mba ụwa, yabụ, nwere ike ịgbagha ma kwalite uto ụwa gị.
Anyi biara ebe a iji mee ka mbughari, uto, mgbasawanye na ihe di nkpa site na inye uzo mbu.
Ọnụnọ pụrụiche anyị dị na mba ụwa mepere emepe na-enye anyị, ọkachamara ihe ọmụma obodo nke na-enyere anyị aka ịnye gị usoro ụzọ kachasị akwado.
Ndị ọrụ mbata na ọpụpụ: 22156.
Ọrụ iwu: 19132.
Ọrụ IT: Ihe omume 1000+
Lọ ọrụ na-arụ ọrụ: 26742.
Anyị na ndị ntorobịa na ndị were n'ọrụ na-arụ ọrụ na mba ndị a akpọtụrụ aha:
Anyị anaghị akwado ma ọ bụ nye ọrụ anyị n'okpuru ụdị aha ndị a kpọtụrụ aha na Onye ọ bụla na / ma ọ bụ azụmahịa:
Ngwaọrụ ọ bụla nwere ike ibute mmegbu nke ikike mmadụ ma ọ bụ tinye ya maka ịta mmadụ ahụhụ.
Azụmaahịa, nkesa ma ọ bụ imepụta ngwa agha, ngwa agha, mgbo agha, mercenary ma ọ bụ ire nkwekọrịta.
Nyochaa nka na ụzụ ma ọ bụ akụrụngwa bughi ngwa ọrụ ma ọ bụ ozi nzuzo.
Omume ọ bụla megidere iwu ma ọ bụ mpụ ma ọ bụ ihe ọ bụla (ojii) nke edepụtara n'okpuru iwu obodo ọ bụla.
Agụ mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Ihe dị ndụ ma ọ bụ ihe egwu dị, ihe kemịkalụ ma ọ bụ ihe ọkụkụ nke gụnyere, akụrụngwa ma ọ bụ igwe eji arụpụta, ijikwa ma ọ bụ tụfuo ihe ndị dị otú ahụ.
Trazụ ahịa, nchekwa ma ọ bụ njem nke akụkụ ahụ mmadụ ma ọ bụ nke anụmanụ, ịkparị anụmanụ ma ọ bụ iji anụmanụ maka nnwale ọ bụla nke sayensị.
Agencieslọ ọrụ na - ahụ maka ikuchi nwa, gụnyere usoro nne na nna maka itinye aka na ma ọ bụ ụdị ọ bụla nke iji ihe ndị ruuru mmadụ;
Ndi otu okpukperechi ha na enyemaka ha.
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ.
Ire ere Pyramid.
Ngwa nri ogwu.
Arụmọrụ azụmahịa, nke site na iwu na usoro obodo nke guzobere oflọ Ọrụ nọ n'okpuru ikikere yana nke a na-eduzi n'enwetaghị ikikere.
Aro ndị a tụrụ aro iji nweta atụmatụ aghụghọ
Atụmatụ mbata na ọpụpụ nke mbata na ọpụpụ nwere ike inyere gị aka iru ebumnuche ebumnuche ụwa gị na ebumnuche gị n'oge na-akwụ ụgwọ.
Ijide aka na ndidi
Anyị ghọtara nke ọma na usoro a bụ maka gị na ọdịnihu ezinụlọ gị ma ị ga-achọ ọtụtụ nduzi na aka ga-ejide usoro ahụ dum. Echegbula na anyị nọ gị!
Ọzụzụ Ndị Ahịa
Anyị ghọtara na mbata na ọpụpụ na-abụkarị ebe mgbagwoju anya ma kwenyere na ezi mmekọrịta na-agụnye ịkekọrịta ozi. Na Ndị na -eme Nde kwuru, anyị na-enye ndị ahịa anyị ọzụzụ na isiokwu dịgasị iche iche maka mbata na ọpụpụ. Anyị na-eji ndidi na-arụ ọrụ maka ndị ahịa anyị.
Anyị na-ezute ndị ahịa anyị kwa oge ma ọ bụ nwee nzukọ vidiyo, dabere na ha dị. Nzukọ ndị a bụ ebumnuche ụlọ ọrụ, atumatu ma ọ bụ omume ndị nwere ike imetụta mmemme mbata na ọpụpụ, nyochaa ma chọpụta mgbanwe mmemme. Anyị anaghị akwụ ụgwọ ihe ọ bụla ọzọ maka nyocha na nzukọ ndị a.
Nduzi nke Ndi Anya na nkwado